खाली पेट लगातार ४ दिनसम्म किशमिशको झोल पिउनुस्, कलेजो र किड्नी सफा पार्नुहोस् । सधैं बिहान किसमिसको पानी पिउनाले शरीरलाई भिटामिन लगायत फलाम पर्याप्त मात्रामा पान्छ । साथै यसमा चिनीको मात्रा पनि कम हुन्छ, यसमा प्राकृतिक एन्टीअ�
&ndash;डा. राजेन्द्र भद्रा /काठमाडौं ।&nbsp;म २२ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । मेरो समस्या हस्तमैथुन हो । मैले विगत नौ वर्षदेखि दैनिक रूपमा हस्तमैथुन गर्दै आएको छु । के हस्तमैथुन गर्नाले शारीरिक कमजोरी हुन्छ ? के धेरै हस्तमैथुन गर्दा स�
रक्त क्यान्सरका बिरामी खत्रीलाई रू एक लाख नगद सहयाेग हस्तान्तरण
दमक / पाँचथर सेवा समाज दोहा कतारको झापा शाखाले दमक ३ का रक्त क्यान्सरका बिरामी भुवन सिंह खत्रीलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । पत्रकार मञ्च दमकमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समाजले रक्त क्यान्सर विरामी खत्रीलाई १ लाख रुपैयाँ
निन्द्रा नपुग्दा हुन्छ यस्ताे खतरा
काठमाडौं । धेरै सुत्नु र कम सुत्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुँदैन । पर्याप्त निद्रा नपुग्दा त्यसले रोग निम्त्याउँछ, भर्खरै गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार निद्रा नपुग्नाले हृदयसम्बन्धी रोग लाग्न सक्छ । तर, के तपाईंलाई थाहा छ ८ �
जिल्ला अस्पतालमै सुत्केरी भएकी महिलाको ‘उपचार नपाउँदा’ मृत्यु
नुवाकोट ।&nbsp;त्रिशूली जिल्ला अस्पतालमा सुत्केरी भएकी एक महिलाको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण मृत्यु भएको छ । बुधबार अस्पताल भर्ना भएकी नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका&ndash;५ की ३५ वर्षीया गोमा वस्तीले बिहीबार बिहान सामान्य अवस्थाम�
के हो हर्निया ? यस्ता छन बच्ने तरिका !
शरीरका कुनै पनि अंगमा कन्टेलिङ क्यापासिटी अर्थात् छाला वा झिल्लीबाट बाहरि निस्कनुलाई हर्निया भएको भनिन्छ।हर्निया शरीरको जुनसुकै अंगमा पनि हुन सक्छ। सामान्यतया अंगमा कमजोरी वा लगातार दबाब भएमा अर्निया हुन्छ। हर्निया पुरुष�
काठमाडौं । पत्रपत्रिका वा कागजमा मिठाईहरु राखेर खाने अहिले धेरैको बानी हुन्छ । के गाउँ के सहर प्रायः ठाउँमा पसलेहरू चटपटे, समोसा, पकौडा, पुरी, जेरी, मिठाईजस्ता खानेकुरा अखबारमा बेरेर दिने गर्छन्  । अर्कातिर, धेरै व्यक्ति घरमा खा
तपाईं आफूलाई स्वस्थ र निरोगी राख्न चाहनुहुन्छ ? यो कुरा पक्का छः उत्तर शतप्रतिशत हो भन्ने नै आउँछ । त्यसो हो भने, आउनुहोस्, तपाईं दैनिक रुपमा यो तालिकाअनुसार उठबस गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । दिन ०१ः ५० पटकदिन २ः ५५ पटकदिन ३ः ६० पट�
काठमाडौँ । नेपाल ७० प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेको औषधि उत्पादक संघले भन्दै आइरहे पनि अझैसम्म नेपाली औषधिले बजारको ४५ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्न सकेको छ । बाँकी ५५ प्रतिशत भारतलगायत अन्य देशबाट आउने औषधि कै रहेको छ । औषध
धुम्रपानले संसारका धेरै मानिसहरुमा धुम्रपानको गहिरो लतलागको छ । तर यदितपाई धुम्रपान गर्नुहुन्छ र छोड्ने बारेमा सोचिरहनु भएको छ भने के तपाईलाई थाहा छ यो बानी छोडेको २० मिनेट भित्रै तपाईको शरिरले तपाईलाई धन्यवाद दिनेछ । चुरोट�
राम्रो स्वास्थ्यका लागि स्वस्थकर खाना खानु आवश्यक रहेको हुन्छ । कुनै पनि खाना खाने उचित समेत रहेको हुन्छ । गलत समयमा खाना खाँदा स्वस्थमा नराम्रो असर पार्न जान्छ । आज हामी तपाईलाई खाली पेटमा खान नुहने खानाहरुबारे बताउँदै छौ । १.
सुखद शनिबार , स्वास्थ्य शनिबार : पायल्सका बिरामीले खाँदै नखानुस् यि चिज
पायल्सबाट धेरै मानिसहरु पीडित भएपनि खुला रुपमा जो कोहीलाई भन्न सकेका हुँदैंनन्। केही उपचारले ठीक भएजस्तो भएपनि फेरि यो समस्या पुनः दोहोरिन्छ। तर खानपान र जीवनशैलीको परिवर्तनबाट पनि यसको समस्याबाट धेरैमात्रामा बच्न सकिन्छ।
सुखद शनिबार , स्वास्थ्य शनिबार : गर्मीमा मुटुका बिरामीले के गर्ने, के नगर्ने ?
गर्मीको समय मुटुका बिरामीका लागि अलि खतरनाक मानिन्छ। वातावरणीय तापमान वृद्धिको असर मुटुमा पर्छ। शरीर चिसो बनाउन पसीना आवश्यक हुन्छ। पसीनाले नै शरीरको तापक्रम सन्तुलनमा राखिरहन्छ। यदि शरीर केही कारणवश चिसो हुन सकेन भने मुटु�
सुखद शनिबार , स्वास्थ्य शनिबार : गर्मिमा उखुको जुस पिउँदै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुस यि ७ कुरा !
गर्मीका बेला हामी प्रायजसो उखुको रस पिउँछौं। यसले आँतलाई शितल बनाउँछ। यसका कयौं फाइदा छन्। गर्भवती महिलाका लागि यो उत्कृष्ट पेय हो। यति मात्रै नभई यो डिहाइड्रेसनबाट बचाउन रामबाणसिद्ध हुन्छ। एनिमिया, क्यान्सरलगायतका रोगमा प�
सुखद शनिबार , स्वास्थ्य शनिबार : थुकका यति धेरै फाइदा, कसरी उत्पादन हुन्छ?
हाम्रो मुखबाट निस्काशन हुने र्याल वा थुक विभिन्न प्रकारका रोगहरु पत्ता लगाउन प्रयोग हुने गरेका छन् । रगतको परीक्षण अगाडि नै मानिसमा फोक्सोको क्यान्सर पहिचान गर्न र्यालको प्रयोग गरिएको युनिर्भसिटी अफ क्यालिफोर्नियाले जनाएक�
सुखद शनिबार , स्वास्थ्य शनिबार : नङमा परिवर्तन आउँदैछ? याद राख्नुस्, गम्भीर रोगको संकेत हुनसक्छ
तपाईंलाई थाहा छ? नङले मानव स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ भनेर इंगित गर्नसक्छ। नङमा सेतो देखिनु, गुलाबी रङको देखिनु वा औँला वरिपरि घाउजस्तो देखिनु स्वास्थ्यमा केही रोगका लक्षण छन् भन्ने जनाउ हो। कलेजो, फोक्सो वा मुटुको समस्या समेत
सावधान ! यस्ता संकेत देखिए मृगौला क्यान्सर भएको हुनसक्छ
खानपानमा ध्यान नदिदा तथा सामान्य रोगको समयमै उपचार नगर्दा ठूलो रोगको शिकार भइन सक्छ। त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न खानपिन तथा शारिरीक कसरतमा समेत ध्यान दिनु पर्दछ। पछिल्लो समय महिला वा पुरुषमा मृगौला क्यान्सरको �
सावधान : वनमा पाइने यस्ता च्याउ खानु त के छुनुसम्म हुँदैन
मानव शरीरका लागि च्याउ अति उत्तम पौष्टिक आहार हो तर त्यही च्याउलाई ननिचेर खाँदा विषको रूपमा परिणत हुने गर्दछ । भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार वर्षात् शुरु भएसँगै विषालु च्याउ खाएर बिरामी पर्नेको सङ्ख्य�
कान गनाउँछ ? हड्डी कुहेको पनि हुनसक्छ है!
कानमा कस्ता रोग लाग्छन्? समयमै उपचार नगरे कस्ता समस्या आउँछन्? आजको&nbsp;नागरिक दैनिकमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ सर्जन&nbsp;डा.रवीन्द्र प्रधानांगसँगको कुराकानी छापिएको छ। कानमा कस्ता रोगहरु लाग्छन्?कान पाक्
सावधान यस्ता पुरुषलाई बढी हुन्छ हर्ट अट्याकको खतरा
एक अनुसन्धानअनुसार मुटुरोगले हुने मृत्युको सम्बन्ध पारपाचुके गरेकासँग समेत गाँसिएको हुने पाइएको छ। ब्रिटिस अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार पारपाचुके (सम्बन्ध विच्छेद) लिएका र विधुरमा मुटुरोगले हुने मृत्युको खतरा पारपाचुके नै